Adreesị: Kongresni trg 13, 1000 Ljubljana, Slovenia;
Ekwentị: +386 1 320 54 66;
Oge ọrụ: kwa ụbọchị site na 09:00 ruo 22:00.
Ndị njem nleta bụ ndị kpebiri ịga leta isi obodo Slovenia , Ljubljana , ga-enwe ike ịhụ ọtụtụ ebe nkiri. Ndị a na-agụnye ihe ngosi oge ochie nke a na-ewepụta na ihe ngosi nka, na nkà nke oge a. Ya mere, Museum of Illusions na-enwe mmasị dị ukwuu, nke a na-ahụkarị site na ebe obibi mbụ, ebe ma ndị okenye ma ụmụaka ga-enwe obi ụtọ iji oge.
Kedu ihe na-adọrọ mmasị banyere Museum of Illusion?
The Museum of Illusions (Ljubljana) na-enye ndị ọbịa nleta na-akpali akpali nke na-enye ohere iji kere òkè n'egwuregwu ọgụgụ isi. N'ụlọ ngosi ihe nka, ị nwere ike ịmefu ma jiri oge na-atọ ụtọ mgbe ị maara ihe banyere ihe owuwu na ịgagharị n'okporo ámá nke isi obodo.
Otu n'ime ihe ndị a ma ama bụ ihe ndị a:
Ụlọ nke ndị njem na-agbada;
ime ihe ngosi, nke e wuru n'uzo di otua ka emere ihe omuma nke odidi nke akwukwo ya;
enyo nke mkpughe, ebe ndị ọbịa nwere ike ịhụ onwe ha site n'akụkụ dị iche iche;
ụlọ, ebe a na-ekepụta mmetụta nke ịdị njọ;
ihe ngosi a na-awụ akpata oyi n'ahụ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụ isi na-egosi efere na mmụọ dị egwu;
Ulo ebe ị nwere ike ịhụ ụwa site na kaleidoscope;
Ụlọ ames, ebe ndị ọbịa nwere ike iche na onwe ha dịkwuo ibu ma belata;
a na-ahụ ọtụtụ ihe ngosi site na prism na-adịghị mma, nke e gosipụtara n'ụdị mmemme ma ọ bụ chorograms. Usoro a na-enye ohere ịhụ foto dị iche iche dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, Count Dracula, na-esite n'ili;
ndị njem ga-enwe ike ịga ije site na ọwa mmiri Vortex, na-agafe na ya agaghị adị mfe, a pụrụ ịchọpụta ihe ngosi ahụ ruo ọtụtụ awa. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na e nwere "vortex" mmetụta, nke na-eme ka eziokwu ahụ pụta na onye ahụ efunahụ ya;
a haziri ebe egwu dị iche iche, ebe ị nwere ike ịsọ mpi n'egwuregwu ọgụgụ isi, na-agabiga ụdị mgbagwoju anya na mgbagwoju anya.
E nwere ike ileta ihe ngosi nka nke ihe ojoo kwa ubochi, oge oru ya bu site n'elekere 9:00 ruo 22:00. Onye ọ bụla nwere ike ịfe, nnwere onwe bụ n'efu. Ụgwọ tiketi bụ 9.5 € kwa okenye, ụmụaka ndị dị afọ ise na ise ruo afọ iri na ise nwere ike ịga maka 5.5 €. A na-enye ego maka ezinụlọ nke nwere 2 ndị okenye na ụmụ 2, ha niile nwere ike ịgafe 23.50 €. Ihe ederede Bekee, Slovenian, Ịtali ga-enyere aka ịkwado nghọta.
The Museum of Illusions bụ na nso nso Congress Congress. Ị nwere ike ịnweta ya site na ebe ọ bụla na isi obodo site na igafe ọha.
Ursulinskaya Church nke Atọ n'Ime Otu
Ụlọ Nzukọ Obodo (Ljubljana)
Ihe nkiri Museum nke Akụkọ Ihe Mere Eme nke Slovenia
Obi obi na aka aka gị
Mgbe akụ lilies na ọdịda?
Akpa - ejiji 2014
Mmanụ aṅụ - ihe ịrịba ama na omenala taa
Enwere m afụ ọnụ
Oge na Saịprọs
Jam nke mkpụrụ vaịn maka oyi
Akpụkpọ ụkwụ nwere imi dị nkọ
Akuku nro maka ebe obibi ahụ
Kedu otu esi emeso nwoke?
Ntughari ihe nfe kachasị dị irè
Mma nsu mere nke osisi
Ntutu ntutu isi na-edozi isi n'ụlọ
Bumpy skid - mgbaàmà mbụ